Magaalo laga mamnuucay cida xad dhaafka ah ee Eeyaha - BBC News Somali
Magaalo laga mamnuucay cida xad dhaafka ah ee Eeyaha
Image caption Eeyaha ayaa inta badan sameeya cida, laakiin dadka deegaanka ayaa cabasho ka soo gudbiya
Maamulka magaalo ku taalla waqooyiga dalka Faransiiska ayaa soo saaray amar lagu mamnuucayo qeylada xad dhaafka ah ee Eeyaha, iyadoo arrintaasna ay qeyb ka tahay dadaal lagu doonayo in lagu yareeyo dhawaaqa magaaladaas.
Laga billaabo maalinta isniinta ah, dadka Eeyaha leh ee ku nool magaalada Feuquières waxay wajihi doonaan ganaac lacageed oo dhan $77 doolar, haddii ay Eeyahhooda si xad dhaaf ah u qeyliyaan ama ay "cida kusoo celceliyaan".
Duqa magaaladaas oo lagu magacaabo Jean-Pierre Estienne ayaa sheegay in amarkan uu soo saaray ka dib markii ay soo badatay qeylada Eeyaha ee ka yeerta xaafadaha.
Eeyaha dunida ku nool oo ah hal bilyan
Hase ahaatee go'aankan ayaa waxaa si weyn u cambaareeyay hay'adaha u dooda xuquuqda xayawaannada.
"Ujeeddadu ma aha in la mamnuucayo Eeyaha ganaaxana dadka si bilaash ah looguma soo rogayo", ayuu yiri Mr Mr Estienne oo la hadlayay wargeyska faransiiska kasoo baxa ee Le Parisien.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas ku daray: "Magaaladu wax nacayb ah uma heyso Eeyaha laakiin marki aad go'aansato inaad Eey yeelato, waa inaad carbisid".
Image caption Dadka Eeyaha leh ayaa lagu ganaaxi doonaa qeyladooda
Amarka mamnuucista qeylada eeyaha, oo uu horraantii bishan ansixiyay xafiiska dowladda hoose, ayaa Eeyaha u diidaya in ay joogaan meelaha xaafadaha u dhow, haddii aysan dadka milkiileyaasha ah la soconin.
Dhammaan Eeyaha ku xad gudba amarkan ayaa ganaax u soo jiidi doona milkiileyaashooda, kuwaasoo lagu ganaaxayo cabasho kasta oo laga soo gudbiyo Eeyahooda.
Balse durba waxaa dacwad cabasho ah laga soo gudbiyay amarkan, waxaana soo gudbisay haweeney ka mid ah dadka deegaanka.
"Waxay haweeneydan leedahay Eeyo dhowr ah, oo ay qaarkood waaweyn yihiin. Isku dayo faro badan ayaan u sameynay inaan wada hadal la galno si aysan uga faa'ideysan", ayuu yiri duqa magaalada.